Radio NUG ၏ ယနေ့ ဩဂုတ်လ (၂၃) ရက် ရေဒီယိုအစီအစဉ်များကို Facebook Live Internet Ra… – PVTV Myanmar
Radio NUG ၏ ယနေ့ ဩဂုတ်လ (၂၃) ရက် ရေဒီယိုအစီအစဉ်များကို Facebook Live Internet Radio အနေဖြင့် ထုတ်လွှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
– နေ့စဉ်သတင်း တင်ဆက်မှု
– အဝေးရာက် ရင်တွင်းစကားသံ (ရွှေရည်စီစဉ်)
– ခွန်အားမျှ ပေးစာ ကဏ္ဍ
– နွေဦးအနုပညာတင်ဆက်မှု – တင်းထား (ရေး – နွေဦးစည်တော်ကြီး၊ ဆို – ကောင်း)
အစီအစဉ်အား Internet Podcast များတွင်လည်း နားဆင်နိုင်ပါသည်။
Like – 12K Share – 2243
2021-08-23 at 9:49 AM
Good morning Radio NUG.!
Hla Lin says:
2021-08-23 at 10:10 AM
2021-08-23 at 11:43 AM
offline မရဘူးလား radio အစား FM ဆို ဖုန်းတိုင်းအဆင်ပြေတာပေါ့
မဂ်လာပါ Radio NUG
2021-08-23 at 12:01 PM
Gg. မဂ်လာပါ Radio NUG
May Yaung says:
2021-08-23 at 12:10 PM
Radio NUG 👏👏👏
Radio NUG သတင်း မှန်များ ထာဝရ တင်ဆက်ရပါလို ၏
ဂါထာဝတရား လက်ကိုင်ထား ပါသည်
2021-08-23 at 1:11 PM
LuttLatt Nyeinn says:
2021-08-23 at 2:02 PM
မြန်မာတူရိယာ တွေနဲ့ တီး ထားတဲ့သံဇဉ် တွေပဲ သုံးသင့်ပါတယ်။
တရုတ် ဆန် နေသလို ပါပဲ။
2021-08-23 at 3:51 PM
Htee Gyaint says:
2021-08-23 at 6:27 PM
2021-08-23 at 8:07 PM
ေအာင္ပဲြသို႔ ခ်ီ NUG
Khin Htay Mon says:
2021-08-23 at 9:39 PM
မဂ္လာပါ Radio N U G
Kwee Swe says:
Gg Radio NUG
2021-08-24 at 8:43 AM
Mingalar par Radio NUG 🥰.
2021-08-24 at 12:28 PM
မဂလာပါ Radio NUG
Thadar Ni says:
2021-08-24 at 8:15 PM
2021-08-25 at 12:05 AM
Minglaba Radio NUG…!!!
Thank you Radio NUG Canada 🇨🇦
မင္းေလး အတြက္ says:
2021-08-25 at 7:01 AM
Sandar Sandar says:
2021-08-25 at 9:27 AM
မဂၤလာပါ NU G Radio Gg
Mauk Kyaw Thae says:
2021-08-28 at 11:48 AM
ရှမ်းကယားကရင်အစပ်က ​ကျေးရွာ​လေးတစ်ရွာမှာ ည ၈ နာရီ အသံလွှင့်အစီအစဥ် ဖမ်းလို့မရပါ
ဆီသို့ စာစဉ် အတွဲ ၂၊ အမှတ်စဉ် (၁) ထွက်ပြီ။…